वीरगन्जमा प्रहरीद्वारा साढे २२ किलो सुन बरामद
वि.सं २०७७ कार्तिक ६ बिहीबार
२०७७ कार्तिक १ शनिबार १५:३५:००
पर्सा प्रहरीले शनिबार ठूलो मात्रामा सुन बरामद गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका– ५ रेशमकोठीमा रहेको गणेश अपार्टमेन्टबाट २२ किलो पाँच सय ७६ ग्राम सुन बरामद गरेको हो ।
प्रहरीका अनुसार विशेष सुराकीको आधारमा अपार्टमेन्टको फ्ल्याट नम्बर ३०३ नम्बरमा ताला फोडेर सुन बरामद गरिएको पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले जानकारी दिइन् ।
सुन बरामद भएको फ्ल्याटमा भारत रक्सौल पूर्वी चम्पारण बिहार हरैयाका अशोक सिन्हा बस्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताइन् । उनका अनुसार सूचना आएको दुई दिनदेखि अपार्टमेन्टमा निगरानी राखिएको थियो । दुई दिनअघि आएको सूचनाले अपार्टमेन्टलाई निगरानीमा राखेर स्थानीय र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा ताला फोडेर सुन बरामद गरिएको उनको भनाइ छ ।
कुन सुन कति ?
शनिबार दिउँसो १ बजेको समयमा प्रहरी प्रमुख पन्तको कमान्डको टोलीले विशेष सुराकीको आधारमा फ्ल्याटमा ताला तोडेर सुन बरामद गरेको छ । बरामद भएको सुनमा ठूलो साइजको सुनको बिस्कुट एक किलोका १३ वटा, सुनको मझौला बिस्कुट ४६ पिस आठ किलो पाँच सय ७६ ग्राम र सुनको सानो एक सय ग्रामको दरले १० पिस अर्थात् एक केजी बरामद पत्रकार सम्मेलनमा पन्तले जानकारी दिइन् ।
यस्तै सुनका विभिन्न गरगहना जम्मा ६ सय ६१ ग्राम र चाँदीको गरगहना तथा थाललगायतका भाँडाकुँडा दुई किलो दुई सय ६२ ग्राम बरामद भएको प्रहरी उपरीक्षक पन्तले बताइन् । उनका अनुसार सुन बरामद भएको फ्ल्याटमा कति जना र को–को बस्दै आएका थिए, यस बवषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रहरी प्रमुख पन्तका अनुसार सुन बरामद भएको फ्ल्याटमा बस्दै आएका सिन्हा केही समयदेखि फ्ल्याटमा नआएको जानकारी प्राप्त भएको छ । ‘सिन्हाका फ्ल्याटबाट केही कागजात पनि बरामद भएको छ,’ पन्त भन्छिन् । यस विषयमा अहिले अनुसन्धान भइरहेकाले केही भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । बरामद भएको समयदेख फ्ल्याटधनी हालसम्म सम्पर्कमा नआएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कहाँबाट भित्रिएको थियाे वीरगन्जमा सुन ?
पर्साका प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पर्सामा अहिलेसम्मको इतिहासमा साढे २२ किलो सुन पहिलोचोटि बरामद भएको छ । ठूलो मात्रामा बरामद भएको सुन भारतमा भित्र्याउनका लागि वीरगन्जमा भित्र्याइएको स्रोतले जनाएको छ । ठूलो मात्रामा अवैध सुन ओसारपसारमा अन्य व्यक्ति पनि संलग्न हुन सक्ने आशंका भएकाले थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कोरोना महामारीमा नेपाल सरकारले कात्तिक मसान्तसम्मका लागि सीमानाका सिल गरेको छ । तैपनि छिटफुटमा सीमानाका खुला भएकाले नाकालाई प्रयोगमा लगाएर भारतमा भित्र्याउनका लागि सुन वीरगन्ज आएको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार बरामद भएको सुन तस्करले भारत भित्र्याउन लगाएको हो कि मुख्य योजनाकारको हो भन्ने विषयमा विस्तारै अनुसन्धानबाट खुल्दै जानेछ । तस्करले तस्करीका लागि सधैँ सिमानाका खुला भएको नयाँ ठाउँलाई आफ्नो माध्यमले ल्याउने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सुनको कारोबारीले एउटा तरिका असफल हुनासाथ उसले तुरुन्तै तस्करीको तरिका बदल्छ । तस्करीका लागि उसले सधैँ आर्थिक समस्याबाट गुज्रिएकाहरूलाई प्रयोग गर्छ । जब तस्करीका लागि उपयुक्त पात्र फेला पर्छ, उसलाई सधैँ निजी सुराकीमार्फत निगरानीमा राख्ने गर्दछन् ।
तस्करीमा प्रयोग हुने सामग्री केही कागजात बरामद भएकाले थप खुल्दै जाने पर्सा प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । बरामद भएको सुन कति महिनादेखि राखिएको छ, कसले लगाएको हो यो विषय गम्भीर रहेकाले अनुसन्धानको बाटो बाट खुल्दै जाने प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार तस्करीमा प्रयोग हुने तरिका मात्र होइन सूचना आदानप्रदानमा प्रयोग हुने मोबाइल, सिमकार्ड, ढुवानी प्रयोग हुने मोटरसाइकलसमेत दोस्रोपटक प्रयोग गर्दैन । जसले गर्दा तस्करीका मुख्य योजनाकार पक्राउ गर्न मुस्किल छ । बरामद सुनको दिन बजार मूल्य ९० हजार प्रतितोलाको रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।
#सुन बरामद # वीरगन्ज
२३ केजी सुन प्रकरण : सुन बरामद भएको फ्ल्याट अशोक सिन्हाको छोरीको नाममा
बन्द फ्ल्याटबाट २३ किलो सुन बरामद : नेपालबाट सुन तस्करीमा बिजेपी नेताका भाइ संलग्न ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
संविधान दिवसमा वीरगन्ज कारागारका १५ जना कैदीबन्दी रिहा हुँदै
कोरोनाको ‘हटस्पट’ वीरगन्जको अवस्था सामान्य बन्दै
वीरगन्जमा २५ भदौसम्म निषेधाज्ञा थपियो, बजार आलोपालो गरी खुल्ने
बाराका कोरोना संक्रमितको वीरगन्जमा मृत्यु
नर्सको तलब ७७ हजारदेखि एक लाख ७९ हजारसम्म बनाउन प्रस्ताव, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार वर्षदेखि लुकायो समितिको सिफारिस
१२ सहकारीमा ९ हजार सदस्यको १२ अर्ब बचत डुब्यो
‘रअ’का हाकिमसामु राष्ट्रवादको हरिबिजोग